ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအစအနကိုစောင့်ဆိုင်း၏လတလျှောက်လုံးကိုငါသိ၏။ ပြီးနောက်အားလုံး, အသက်ရှိများ၏ပြည်နယ်ကလေးဖွံ့ဖြိုးဘယ်လိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း - မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောပန်ကရိယအဖြစ်နာတာရှည်ရောဂါများပိုမိုဆိုးရွားလာသောအခါအချိန်။ အဆိုပါအကူအညီများကိုဆေးလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်အတွက်သင့်ဆရာဝန် Pancreatin သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေဆေးဝါးများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ ဒါကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဧည့်ခံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်သတင်းအချက်အလက်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ကျွန်မကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း Pancreatin နိုင်သလား?
ပြင်ဆင်မှုတစိတ်တပိုင်းအဖြစ်အစာခြေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီအင်ဇိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ကအပြည့်အဝအင်ဇိုင်းတွေလူ့ပန်ကရိယနှင့်အတူလိုက်လျော။ သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကျိုးသည်လျှင်, tool ကိုပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကူညီပေးပါမည်။
သင့်ဆရာဝန်ဆေးအကြံပြုနှင့်ထိုမိန်းမသည်ဧည့်ခံ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသံသယရှိပါတယ်ဆိုပါကသူ့ကိုအားလုံးမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဆရာဝန်ကတရားမျှတဧည့်ခံသည်အဘယ်အရာအခြေအနေများအတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း Pancreatin ဖြစ်နိုင်သောသို့မဟုတ်မဖြစ်တယ်, အသေးစိတ်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, မူးယစ်ဆေးယင်း၏ contraindications နှင့်အင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်။ မိမိအချိန်းသာမန်နီးဖက်စ်လိုအပ်ချက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်တလက်တွင်, ဒီဆေးဝါးကောင်းကောင်း, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်နို့တိုက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မူးယစ်ဆေးသန္ဓေသားအပေါ်မပါအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသပြီလေ့လာမှုများရှိပါသည်။ မရှိမရှိကိုယ်ဝန်ဆောင် Pancreatin ၏မေးခွန်းကိုတစ်ခုတည်ပြီးသတ်တယ်အဖြေလို့ပဲ။ ဒါဟာအားလုံးကိုယ်ဝန်ကနေအဖြစ်မျှော်လင့်မိခင်မဆိုဆေးကြာရှိမရှိအပေါ်အမျိုးသမီးများ၏ပြည်နယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဆရာဝန်အကြောင်းပြချက်ရှင်းလင်းချက်ပေးခြင်း, သူ့ချိန်းအပြစ်လွှတ်ထားလျှင်, အဲဒါကိုနားထောင်ရန်နှင့်ဆေးဝါးယူရန်လိုအပ်ပေသည်။
မှာ gastritis အနိမ့်အချဉ်ဓာတ်အားဖြင့်၎င်း,
အဆိုပါ ultrasound မီ။
အစောပိုင်းကိုယ်ဝန်နှင့်အတူ Pancreatin ကြောင့် toxemia ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အစာခြေလမ်းကြောင်းနှင့်အတူပြဿနာများအားပေးပြီးမှနိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အစာခြေပြဿနာများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိ၏။ အခြေအနေကအစားအသောက်သို့မဟုတ်ကျော်အတွက်အမှားအယွင်းများအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရှားသည်။ 1 သုံးလပတ်အတွက်ကိုယ်ဝန်အတွက် Pancreatin သာဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုပေါ်, ယူနိုင်ပါသည်။ ဤကာလနောက်, သောက်မဆိုဆေးဝါးများနှစ်လိုဖွယ်မဟုတ်ပေ။
ကုသမှုဒေါက်တာခန့်အပ် အများအားဖြင့်4ကြိမ်နေ့ 1-2 တက်ဘလက်တက်သောက်သုံးဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ အစာစားစဉ်သို့မဟုတ်ချက်ချင်းနောက်မှာဖြစ်သင့်တယ်ဆေးကိုယူပါ။ သောက်စရာအေးဂျင့်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်အတူရေဖြစ်သင့်သို့မဟုတ်သင် Borjomi ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျောက်ပြားဝါးခြင်းမရှိဘဲတပြင်လုံးကိုဖြစ်သင့်မျို။ ကုထုံး၏ Duration: ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဒါဟာကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ် diagnoses ၏ပြည်နယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တချို့ကမူးယစ်ဆေးသူတို့မိခင်နို့ထဲမှာပေါ်လာနိုင်ပါသည်အတိုင်း, မွေးခင် cancel ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်3သုံးလပတ်အတွက် Pancreatin ကိုယ်ဝန်ပေးပို့မတိုင်မီပင်ကိုတိုက်ရိုက်သောက်ရနိုငျသညျ။ သက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိလျှင်, ဆရာဝန်များကတာကိုရပ်တန့်ဖို့မအကြံပေးများနှင့်နို့စဉ်အတွင်းလိမ့်မည်။
အဆိုပါ 2nd သုံးလပတ်အတွက်ကိုယ်ဝန်အတွက် Pancreatin လည်းအခြားနှစ်ခုကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, သာအထူးကု၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်။
တချို့အမျိုးသမီးတွေဆေးဝါးယူပြီးအပါအဝင်မည်သည့်အစာခြေမမှန်အောက်မှာနိုင်ပါတယ်ကွောငျးတှေ့ ချုပ် နှင့်ရင်ပူ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့အဲဒီဆေးပြားထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများနှင့်အတူမကူညီကြဘူး။ ဆန့်ကျင်ရင်ပူမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးထံမှအကြံဉာဏ်ကိုမေးမြန်းဖို့ပိုကောင်းဒါချုပ်စေနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
Tantum Verde - ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်
ကိုယ်ဝန်5ပတ်ကြာ - သန္ဓေသားအရွယ်အစား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် platelets လျှော့ချ
ကိုယ်ဝန် 28 ပတ်ကြာ - သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
လက်တော်ပေါ်ပင့်ကူ - ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာ
Givenchy Dahlia Divinity
အကျိတ် necrosis အချက်
တရားဝင်: ရစ်ကီမာတင်နဲ့ Dzhvan Yosef လက်ထပ်အတည်ပြု
Aerogrill အတွက် Cutlets
သားသမီးရဲ့ drawings သို့မေလ 9
အဆိုပါမိုက်ခရိုဝေ့ clean up လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တစ်ဦး nosebleed ရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?